Shabdako Ghar » आत्मबल बढाउने त्यो ट्वीट आत्मबल बढाउने त्यो ट्वीट – Shabdako Ghar
आत्मबल बढाउने त्यो ट्वीट
आइसीयू वार्ड सिस्टर,
इलिङ हस्पिटल, बेलायत
जतिबेला बेलायतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिन थालेको थियो, त्यत्तिबेला मेरो धेरै समय अस्पतालमै बित्थ्यो । घर फर्कंदा राति भैसकेको हुन्थ्यो । घर फर्केपछि पनि खाना मन नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने हुन्थ्यो ।
संक्रमण फैलिएको चौथो दिन के भयो भने, घर फर्कन ड्राइभिङ्ग गर्दै थिएँ, एकाएक मन भक्किानिएर आयो । कोभिडका बिरामी एक पछि अर्काे गर्दै आइरहेको, बिरामीलाई आइसीयूमा लगेको दृश्य आँखा वरिपरि नाचिरहे । अघिल्लो दिन श्रीमान्लाई भर्ना गरेर गएकी श्रीमतीलाई भोलिपल्ट तिम्रो श्रीमान् बित्नु भयो भनेको क्षणले बिचिलत बनाएको थियो । यो के भइरहेको छ ? किन भइरहेको छ ? यो प्रश्नले ड्राइभिङ भर वेचैन बनाइरह्यो ।
कोभिडका बिरामी अस्पतालमा आउन थालेको चौथो रात म सुत्न सकिन् । बिहानको त्यस्तै सबा तीन बजेको हुँदो हो, ट्वीट गरँे, ‘इज देयर एनी नर्सेस एण्ड डक्टर्स अर हेल्थ केयर प्रोफेसनल हु इज नट स्लिप लाइक मी ह्याभिङ फ्लासब्याक सिन अफ इमरजेन्सी, आइसीयु, अबाउट दि पेसेन्ट, अबाउट दि फेमली,…….. । धेरै नर्स र डाक्टरहरूलाई मैले भोगेकै जस्तो समस्या रहेछ । यो कुरा मैले मेरो ट्वीटलाई उहाँहरुले रिट्वीट गरेपछि बुझेँ । त्यसपछि मलाई अलि रिलिफ भयो ।
मेरो ट्वीटलाई मैले मास्टर्स गरिरहेको विश्वविद्यालयले पनि रिट्वीट गरेछ । मैले भोगिरहेको समस्या त धेरै डाक्टर, नर्सहरूले भोगिरहनु भएको रहेछ । उहाँहरूले मलाई पनि तिमीलाई जस्तै भएको छ भनेपछि मेरो मन हल्का भयो ।
यसबाट मैले के सिके भने, आफ्ना कुरा सेयर गर्दा मन हल्का हुँदो रहेछ । रिलिफ महसुश हुँदो रहेछ । त्यो ट्वीटले म आफैंलाई परामर्श दिएको अनुभव गरेँ । आत्मबल बढेको अनुभूति भयो ।
संसारभरका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासलाई आत्मबलले जितेर काम गरिरहेका छन् । म पनि ती स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पृथक कसरी हुन सक्थे र । म भित्र रहेको त्रासलाई मेरै ट्वीटले कम गर्न मद्दत ग¥यो । ट्वीट त्यो एक खालको मनोवैज्ञानिक परामर्श नै भयो । त्यसपछि ममा हिम्मत आयो ।
सुविधा सम्पन्न देशमा कार्यरत म पीपीई लगाएर बिरामीको बेड नजिकै सहजै पुग्न थालेँ । बिरामीका हात सुम्सुम्यर नडराउन अनुरोध गरेँ । तपार्इं ठीक ठाउँमा आउनु भएको छ । हामी छौं । तपाईलाई हामी हेर्छौं । घर परिवार सबैलाई बिर्सनुस् भनेँ । आफ्नो स्वास्थ्यलाई मात्रै ध्यान दिन अनुरोध गरेँ । मलाई छिट्टै निको हुन्छ भन्ने कुरालाई मनमा राख्न आग्रह गरेँ । बिरामीको आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गरेँ । त्यसो गर्दा बिरामी सकारात्मक भइ सम्हालिएको अनुभव गरेँ । कोरोनासँग लड्न मेरा यी वाक्य बिरामीका लागि औषधि जस्तै भए ।
अहिले बेलायतमा पहिला जस्तो त्रसित अवस्था छैन । पहिला भन्दा परिस्थिति अलि बदलिएको छ । पूर्ण रूपमा निर्भय हुन सक्ने अवस्था आउन अझै समय लाग्ला । मेरो अनुभवले के बुझायो भने, बिरामी जति आत्तिन्छ, त्यत्ति नै निको हुन समय लाग्छ । मन डराउँदा, हर्मोनहरू सहजै उत्पादन हुन्नन् । त्यसले रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ ।
म अहिले कर्मभूमिमा छु । नेपालबाट बेलायत आएको १५ वर्ष भएछ । कोभिडबाट एक, दुई गर्दै पचासको हाराहारीमा नेपाली संक्रमित भएका छन् । बेलायत, अमेरिका फ्रान्सजस्ता सम्पन्न र सिस्टममा चलेका मुलुकलाई त यो महामारी सम्हाल्न हम्मेहम्मे परेको छ । नेपालमा यहाँ जस्तो कोभिड ‘आउट ब्रेक’ भयो भने कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्ता लागेको छ ।
कोभिडका बारेमा नेपालीको बुझाइ राम्रो नै होला । सरकारी अस्पतालले जुन तहमा व्यवस्थापन गर्नु पथ्र्यो, त्यो भएको छैन भन्ने लाग्छ । एडभान्स प्रि प्लान गर्नुपर्छ । नर्स तथा डक्टरहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । डाक्टर, नर्सलाई संक्रमण भए, कोभिडका बिरामीलाई जोगाउन सक्ने कोही हँुदैन । त्यसैले चिकित्साकर्मीको सुरक्षा महत्वपूर्ण हो । साथै उहाँहरूको मनोबल बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पीपीईको उपलब्धतामा कमि भन्ने खबर पढेकी थिएँ, यदि त्यस्तो हो भने, जति सक्दो छिटो व्यवस्थापना गरिहाल्नु पर्छ । अस्पताल व्यवस्थापन, जनशक्ति र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । युकेमा सर्जन डक्टरहरू अहिले आइसीयू नर्सका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । बेलायतमा जस्तै जनशक्ति तथा आवश्यक औषधिसहित एडभान्स प्रिपरेशन नेपालमा अहिले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुरु सुरुमा म कार्यरत अस्पतालमा पीपीई पर्याप्त थियो । बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि सकिने अवस्थामा पुग्यो । हामीले पुर्नप्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीलाई धोएर पनि प्रयोग ग¥यौं । पीपीई नलगाई अहिलेसम्म बिरामीको अगाडि गएको छैन ।
बिरामीको अगाडि जानुपर्दा पीपीई नलगाएको छ भने नजाँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो एथिकल गाइडलाइन छ । बिरामी छट्पटाएको अवस्था छ भने बिरामीलाई हेर्नु की पीपीई लगाएको छैन भनेर बस्नु ? धन्न अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन । थोरै थोरै प्रयोग गरेर भए पनि पीपीई पु¥याइरहेका छौं ।
लण्डनमा म एक्लै छु । घरबाट आउने जाने गर्छु । डाक्टरहरू, नर्सहरू जसका घरमा बृद्धाहजुरबुबा हजुर आमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू अस्पतालमै तथा कतिपय अस्पतालले व्यवस्था गरेको होटलमा बस्नु भएको छ । सानो बच्चा भएका आमा नर्सहरूले दिउँसो चाइल्ड केयरमा बच्चा राखेर दिनभर काम गरी बेलुका घरमा फर्कनु हुन्छ ।
स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकाहरूमा कोभिड संक्रमण हुने खतरा धेरै हुन्छ । हामीलाई कोभिड नलागे पनि क्यारियर बनिरहेका हुन सक्छौं । एक्लै बस्नेहरू नुबाई धुवाई गरेर स्यानिटाइजर प्रयोग गरी घर फर्कन्छौं ।
बेलायतमा थुप्रै नेपाली छौं । सुरु सुरुमा कोभिडलाई त्यति गम्भीर ढंगले लिइएन । चाइनामा आउटब्रेक भयो, यहाँ त्यस्तो होला भन्ने नै लागेन । कार्यक्रमहरू भइरहे । बेलायतमा संक्रमण बढ्यो, मान्छेको मृत्यु नै भएपछि हामी गम्भीर भयौं । अस्पतालहरूले विशेष तयारी गर्न थाले ।
नेपालीहरूको संघ संस्था तथा डक्टर तथा नर्सहरूको टिमले पनि जनचेतनाका लागिका लागि काम गर्न थाल्यौं । डाक्टर्स एसोसिएनसन, नर्सिङ एसोसिएसनले अनलाइन, फेसबुक लाइभमार्फत चेतना फैलायो । अंगे्रजी बुझ्दै नबुझ्ने नेपालीलाई पनि उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालेका छौं । फोन गरेर भए पनि बुझाएका छौं ।
म नेपालमा बीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पसबाट पिसिएल नर्सिङ सकाएर बेलायत आएको हुँ । यहाँ आएपछि सुरुमा एक वर्ष यहाँको इन्टर्नसीप चेयरमा बसेर काम गरेँ । त्यसपछि गर्नु पर्ने कोर्ष गरे ।
अहिले म इलिङ अस्पतालको आइसीयुमा कार्यरत छु । अहिले म दुई फरक फरक भूमिकामा छु । एउटा आइसीयूको स्टल हो अर्काे विशेषज्ञता तहको । यो तहमा पुगिसकेपछि आइसीयू बाहिरका सिकिस्त बिरामीको हेल्थ कन्डिसनमा ¥यापिड डिक्लाइन आयो भने त्यहाँका डक्टर, नर्सलाई सरसल्लाह दिने, आइसीयू सार्नुपर्ने रहेछ भने आइसीयू सार्न संलग्न हुनु पर्छ ।
अहिले बेलायत कोभिड संक्रमणको पाँचौ सातामा छ । सुरु सुरुमा मैले काम गर्ने अस्पतालको एरियामा ठूलो संख्यामा बिरामी देखा परे । अस्पतालमा धेरै बिरामी आए । अस्पतालको नर्मल वार्डमा भएका बिरामीलाई डिस्चार्ज गरी त्यसलाई कोभिड वार्डमा परिणत गरांै । बिरामीको संख्या धेरै नै बढेपछि आइसीयूलाई पनि विस्तार गरेर ५०–६० वेड बनायौं । बेलायतका सबै अस्पतालले जनशक्ति बढाउने र भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने कामलाई अघि बढाएका थिए ।
(कँडेल, नर्सिङ एसोसिएसन बेलायतकी पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार हुन्)
#प्रसुना कँडेल #आइसीयू #इलिङ हस्पिटल # कोरोना भाइरस # कोभिड–१९ # ट्वीट # बिरामी #स्वास्थ्यकर्मी #मनोवैज्ञानिक